WordPress.com? ငါပထမ ဦး ဆုံးအသုံးပြုမယ်လို့အဘယ်ကြောင့်ဒီနေရာမှာဖြစ်ပါတယ် | Martech Zone
WordPress.com? ငါပထမ ဦး ဆုံးအသုံးပြုမယ်လို့အဘယ်ကြောင့်ဒီနေရာမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, မတ်လ 13, 2013 ကြာသပတေးနေ့, မတ်လ 14, 2013 John အပြာရောင်
WordPress သည်အဓိကတစ်ခုဖြစ်သည် ဘလော့ဂ်ပလက်ဖောင်းများ ရရှိနိုင်နှစ်ခုပုံစံများအတွက်လာ, WordPress.com နှင့် WordPress.org.
ပထမပုံစံ WordPress.com, ၀ က်ဘ်ပေါ်၌အခမဲ့နှင့်အခကြေးငွေ ပေး၍ ရသော blogging tools (သင်တန်းအား WordPress ကို သုံး၍) ကမ်းလှမ်းသောစီးပွားဖြစ်ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ WordPress.com သည်အသုံးပြုသည် ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုအနေဖြင့် software ကိုအသုံးပြုသည် ဘလော့ဂ်ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကိရိယာများကိုထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်လုံခြုံရေးနှင့်ပါဝင်မှုပေးပို့ခြင်း (bandwidth, storage, etc) ကဲ့သို့သောအရာများကိုဂရုစိုက်ခြင်း။
ဒုတိယပုံစံ WordPress.org, ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းရန်ကူညီပေးသည်သောအသိုင်းအဝိုင်းဖြစ်ပါတယ် open source ဖြစ်ပြီး WordPress ဆော့ (ဖ်) ဝဲ၏ဗားရှင်း။ WordPress ဘလော့ဂ်လုပ်ခြင်းကိရိယာတစ်ခုလုံးကိုသင်ရွေးချယ်သောကွန်ပျူတာ၊ ဆာဗာသို့မဟုတ် hosting provider သို့ဒေါင်းလုပ် လုပ်၍ ထည့်သွင်းနိုင်သည်။ တည်ဆောက်မှုသည်သင်၏လက်ထဲတွင်ရှိပြီးလိုအပ်သောလုံခြုံရေးနှင့်ပါဝင်မှုကိုဖြည့်ဆည်းပေးရန်သင့်တွင်တာဝန်ရှိသည်။
အဘယ်ကြောင့်သင်တစ် ဦး ကိုအခြားတစ်ခုထက်ပိုရွေးမည်နည်း။
အဘယ်ကြောင့် WordPress.com ပထမ ဦး ဆုံးနှင့်အတူစတင်ကြပါစို့။ သတိရပါ၊ သူတို့သည်ဘလော့ဂ်အဖြစ်သွားရန်အဆင်သင့်ဆော့ဖ်ဝဲကိုပေးသည်။ သင်တာဝန်ယူလိုသောတည်ဆောက်ပုံသည်သင်လိုချင်ပါကသင့်ဘလော့ဂ်၏ပုံစံကိုဒီဇိုင်းဆွဲသည်။ အခင်းအကျင်း (သို့) အပြင်အဆင်စတဲ့အရာတွေကိုစုစည်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ အဲဒီမှာ defaults ရှိပါတယ်နှင့် WordPress.com အကြံပြုချက်များ။ WordPress.com သည်ကောင်းမွန်သောအရွယ်အစားစုံကိုလည်းပေးထားသည် Widgets တွေ နှင့် plugins ကိုသင်၏ဘလော့ဂ်သို့စွမ်းဆောင်ချက်များနှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းများထည့်သွင်းပေးသောဘလော့ဂ်အသေးစားများဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အတိတ်ဘလော့ဂ်တင်ထားသည့်အညွှန်းများကိုသင်လိုချင်ပါသလား။ အဲဒီမှာ မော်ကွန်းတိုက်ဝစ်ဂျက်။ Flickr မှသင်၏နောက်ဆုံးဓာတ်ပုံများကိုပြလိုပါသလား။ အဲဒီမှာ Flickr ဝစ်ဂျက်.
WordPress.com သည်စီးပွားဖြစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ သင်၏ဘလော့ဂ်ကိုမြှင့်တင်ရန်အပိုပစ္စည်းများကိုပေးသည်။ ဤအပိုကုန်ကျစရိတ်များမှာစျေးနှုန်းချိုသာသော်လည်း၊ သင်၏ဘလော့ဂ်ကို ပို၍ ပင်တည်ဆောက်ရန်ကူညီသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ပုံမှန်အခင်းအကျင်းများသည်ဘလော့ဂ်စတင်ရန်လုံလောက်သည်။ သို့သော်အချို့သောရုပ်ပုံများ (သို့) အပြင်အဆင်သည်သင်၏စတိုင်နှင့်ပိုမိုကိုက်ညီလိုပါကသင်ဝယ်လိုသည် ပရီမီယံဆောင်ပုဒ်.
WordPress.com တွင်သင်ဘလော့ဂ်တစ်ခုဖွင့်သောအခါ၊ အခမဲ့ဗားရှင်း၌၊ သင်၏-blog-name.wordpress.comဒိုမိန်းအမည်ကိုရရှိလိမ့်မည်။ ဥပမာ: လယ်သမား။ wordpress.com မဟုတ်သောဒိုမိန်းအမည်တစ်ခုရှိရန်သင်၏ဝန်ဆောင်မှုကိုအဆင့်မြှင့်တင်ရန်လိုအပ်သည် စိတ်ကြိုက်ဒိုမိန်းအမည်.
WordPress.com သည်တဖန်စီးပွားဖြစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့သည်ရံဖန်ရံခါအခမဲ့ဘလော့ဂ်များပေါ်တွင်ကြော်ငြာများကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ အဲဒီကြော်ငြာတွေကို ၀ ယ်ခြင်းအားဖြင့်သင့်ဘလော့ဂ်မှာပေါ်လာတာကိုရှောင်ရှားနိုင်ပါတယ် Value အစုအဝေးကို။ Value အစုအဝေးသည်အပိုနေရာများ (သင်၌ရုပ်ပုံများများစွာရှိပါကအရေးကြီးသည်) ကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးသည်။ သင့်အားစိတ်ကြိုက်အခင်းအကျင်းတစ်ခုနှင့်စိတ်ကြိုက်ဒိုမိန်းအမည်တစ်ခုရှိရန်ခွင့်ပြုသည်။
သင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် WordPress.com အသုံးပြုမှုကိုကန့်သတ်ချက်များရှိသည်။ WordPress.com မှ ၄ င်းတို့၏တရား ၀ င်အရာရှိများကိုမထောက်ပံ့ပေးလျှင်သင်လိုချင်သော plugin ကို အသုံးပြု၍ မရပါ ဝန်ဆောင်မှု။ ဥပမာအားဖြင့်၊ SexyBookmarks များ ပလပ်အင်လား။ WordPress.com တွင်၎င်းတို့၏အဓိက plugin ၀ န်ဆောင်မှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် SexyBookmarks မရှိပါ။ အသုံးပြုချင်တယ် NextGen မီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှုပလပ်အင်? ၎င်းသည် WordPress.com ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းမဟုတ်ပါ။
WordPress.com တွင်မျှဝေသည့်လင့်ခ်များမရှိပါ (ဆိုလိုသည်မှာကြည့်ပါ) မျှဝေခြင်း) သို့မဟုတ်မီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှု (ဤသူတို့လည်းကြည့်ပါ) မီဒီယာစာကြည့်တိုက်) ။ WordPress သည်ပလပ်ဂင်များအသုံးပြုခြင်းကိုကန့်သတ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းမှာ plugins များသည်အလုပ်လုပ်နေသော WordPress.com ၀ န်ဆောင်မှုကိုသေချာစေရန်အချိန်ကြာမြင့်စွာထိန်းသိမ်းထားရမည့် software များဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ မည်သည့် plugin ကိုမဆိုခွင့်ပြုခြင်းသည် WordPress.com ၀ န်ဆောင်မှုကိုပျက်ပြားစေပြီးလုပ်ငန်းစဉ်တွင်သင့်ဘလော့ဂ်နှင့်ပြissuesနာများဖြစ်ပေါ်စေသည်။
အဘယ်ကြောင့် WordPress.com ကိုသုံးပါ? အကြီးမားဆုံးအကြောင်းပြချက်မှာအခမဲ့ဖြစ်စေ၊ ပရီမီယံအထုပ်အပိုးများဖြစ်စေ ၀ ယ်ရန်လိုအပ်ခြင်းထက်နိမ့်သည် ထိန်းသိမ်းရန် သင်၏ကိုယ်ပိုင် WordPress.org ဆိုဒ် WordPress.com ၏အဘယ်အရာကိုကမ်းလှမ်းသည်ကိုသူတို့၏အခမဲ့ဗားရှင်းတွင်စဉ်းစားပါ - ၎င်းတို့သည်စီမံခန့်ခွဲရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းရန် web server တစ်ခုသို့သွားရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သော blogging platform ဖြစ်သည်။ နှင့်မှကုန်ကျပရီမီယံအထုပ်အဘို့, $ 99 မှ $ 299 (UPDATE 2013 03 13: တစ်နှစ်လျှင်ဒေါ်လာ ၉၉ မှ ၂၉၉ အထိ) သူတို့ကလုပ်အား၊ အချိန်၊ Backup တွေကိုနှင့်သင့်ဘလော့ဂ်ကိုသေချာစေရန်ကြိုးစားခြင်းနှင့်သင့်ပရိသတ်ကိုအသိပေးခြင်း။ သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည် blogging ကိုအာရုံစိုက်ပြီးထိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအတွေးအခေါ်များကိုရှာဖွေပြီးအခြားသူများအားဝေမျှနိုင်သည်။
ကိုယ်ပိုင် WordPress ကိုအသုံးပြုထားသော WordPress.org ကော။ အထက်ဖော်ပြပါအတွေးများနှင့် WordPress.com ကိုအဘယ်ကြောင့် WordPress ကိုသင်၏ကိုယ်ပိုင်နေရာတွင်ပင် download လုပ်၍ setup လုပ်ချင်သနည်း။
လူအများစုကဒီလိုလုပ်ကြရခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကထိန်းချုပ်မှုပိုလို့ပဲ။ သင်ရွေးချယ်သောပလပ်ဂင်များနှင့်ဝစ်ဂျက်များကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်သင်၏အလုပ်၏ဓာတ်ပုံပြခန်းများကိုဖန်တီးလိုသောဓာတ်ပုံဆရာတစ် ဦး ဖြစ်လျှင် NextGen မီဒီယာပလပ်အင်သည်သင်လိုအပ်သည်။ ဒါမှမဟုတ်ကြည့်ရှုလိုတာကိုအခြေခံအကြောင်းအရာများနဲ့အပြည့်အစုံစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ချင်တယ်ဆိုရင် စစ်တမ်း or ကမ်ဘာဦးWordPress.org သည်သင့်အတွက်ဖြစ်သည်။
သင်၏ကိုယ်ပိုင်ကြော်ငြာများကိုသင်ဖွင့်လိုပါကသင်ကိုယ်တိုင်စီစဉ်ထားသော WordPress သည်သင်လိုအပ်သည်။ WordPress.com သည်တ ဦး တည်းနှင့်သက်ဆိုင်သောကြော်ငြာများသို့မဟုတ်အခြားအလားတူစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများကိုပြုလုပ်ရန်ခွင့်မပြုပါ Advertising ကြော်ငြာ).
ကိုယ်ပိုင်စီစဉ်ထားသည့် WordPress သည်တည်ဆောက်မှုနှင့်ပြင်ဆင်မှုများအတွက်ပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသည်။ သို့သော်ထိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့်အတူတာဝန်လာပါတယ်။ သင့်အနေဖြင့် hosting အတွက်တာဝန်ရှိသည် (ဥပမာ service တစ်ခုကဲ့သို့) BlueHostလိုအပ်သလိုဘလော့ဂ်ဆော့ဝဲလ်ပြုပြင်ခြင်း အဆင့်မြှင့်တင်), နှင့် Backup တွေကို.
ဘယ်ရွေးရမလဲ။ မင်းဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဆိုရင် ရုံစတင် blogging ပြီးရင် WordPress.com ကိုအကြံပေးပြီးသင့်ဘလော့ဂ်ကိုအလေ့အကျင့်တစ်ခုအဖြစ်ဖွံ့ဖြိုးအောင်အာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်။ ဤအကြောင်းပြချက်သည်သင်၏အချိန်တန်ဖိုးဖြစ်သောကြောင့်သင်အလိုရှိသည် z (စွန့်ပစ်အချိန်အတွက်ဖန်စီအသုံးအနှုန်း) ပတ်ပတ်လည်? မင်းရဲ့ပန်းတိုင်ကပရိသတ်နဲ့ဆက်သွယ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ သင်၏ဖောက်သည်များပုံမှန်အခြေခံပေါ်မှာ။ Premium package နှင့်ပင်စတင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်သည်သင်၏အချိန်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်နိမ့်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုမဟုတ်ပါကဘလော့ဂ်ပြုလုပ်လိုပါက WordPress.com အခမဲ့ပုံစံသည်စတင်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ ဘလော့ဂ်ဂါ၏အကြောင်းအရာနှင့်အလေ့အကျင့်များကိုအာရုံစိုက်ရန်ခွင့်ပြုချက်မတောင်းဘဲ ထပ်မံ၍ မရ။
(၆) လကြာပြီးနောက် blogging (အပတ်စဉ်၊ ဟုတ်လား) ပြီးသည့်အခါသင် WordPress.com ကိုအသုံးပြုမှုကိုပြန်လည်လေ့လာချင်ပေမည်။ မပြည့်စုံသေးသောစီးပွားရေးသို့မဟုတ်ဘလော့ဂ်၏အရေးကြီးသည့်လိုအပ်ချက်များကိုစဉ်းစားပါ။ ထိုမပြည့်စုံသောလိုအပ်ချက်များကိုစိတ်ထဲ ထား၍ သင်ကိုယ်တိုင်စီစဉ်ထားသောဘလော့ဂ်သို့ပြောင်းရွှေ့ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်သည်။ WordPress.com မှ WordPress.org သို့ကူးပြောင်းခြင်းသည်တော်တော်လေးကိုကောင်းမွန်သည် ရှေ့သို့။ ဒါဟာစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမယ့်ဖြစ်စဉ်ကိုလူသိများသည်။
Tags: အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပWordPresswordpress ကို hostingwordpress.com
John သည် Community Creation ၏အကြီးအကဲဖြစ်သည် Truffle မီဒီယာ။ Truffle Media Networks သည် Ag-Media ကိုအရည်အသွေးကောင်းမွန်သော၊ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်သက်ဆိုင်သောမီဒီယာစီးရီးများထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးခြင်းအားဖြင့်သင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အငြင်းပွားစရာမရှိ
မတ်လ 13, 2013 မှာ 7: 11 pm တွင်
ငါလုံးဝ, 100% ဒီတစ်ခုပေါ်တွင်သင်တို့နှင့်အတူသဘောမတူဂျွန်! control WordPress.com တွင်ထိန်းချုပ်မှုသည်အားနည်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်ဟုသင်ထောက်ပြခဲ့သည် - ၎င်းသည်ဝစ်ဂျက်များ၊ အကြောင်းအရာများနှင့်ကြော်ငြာများကိုထိန်းချုပ်ရုံမျှသာမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် optimization နှင့် cache ကိုလည်းထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ အပေါ်တစ် ဦး က Self- တည်ခင်းsiteည် site ကို WPEngine ဒေတာစီမံခန့်ခွဲမှု၊ လုံခြုံရေးစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း၊ အရန်ကူးခြင်းများ၊ ဇာတ်စင်,ရိယာတစ်ခု၊ redirect management console၊ အကြောင်းအရာဖြန့်ဝေသည့်ကွန်ယက်၊ အနုပညာယာယီသိမ်းဆည်းစနစ်၏အခြေအနေ၊ root directory များသို့ဝင်ရောက်ခွင့်၊ တစ်လလျှင်။ သင်၏ WordPress ထည့်သွင်းမှုကို WordPress.com တွင်တင်ခြင်းဖြင့်မလျှော့ပါနှင့် - ၎င်းသည်အချိန်ဖြုန်းတီးခြင်းသာဖြစ်သည်။
Jason Bean ပါ
မတ်လ 15, 2013 မှာ 1: 16 AM
ငါဒီဂိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီး Doug နဲ့လည်းသဘောတူရတယ်။ အဆုံး၌၊ ၎င်းသည်အားလုံးပြိုကျသောအခါအခြားတစ်ခုနှင့်တစ်ခုသွားရခြင်းသည်မလွယ်ကူပေ။ သို့သော်သင်ကိုယ်တိုင်စီစဉ်ထားသောလမ်းကြောင်းကိုသွားသည့်အခါသင် ပို၍ ထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မည်။ ယခုတစ်စုံတစ် ဦး သည် WordPress ကိုစူးစမ်းလေ့လာလိုပြီး“ တာယာကိုကန်” လိုပါက အကယ်၍ သင်အမှန်တကယ်ငွေမသုံးစွဲလိုပါက .com ဖြေရှင်းချက်တွင်ကိုယ်ပိုင် site တစ်ခုတည်ဆောက်ပါ။ ဒါဟာ Blogger ထက်အများကြီးပိုကောင်းပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်သင်အွန်လိုင်းပေါ်မှာဘာလုပ်နေသလဲဆိုတာကိုအနည်းဆုံးလေးလေးနက်နက်ပြောရင်တောင်မှပေါ့။ .com ဖြေရှင်းချက်နှင့်အတူသွားပါ။ အကူအညီလိုသူမည်သူမဆိုအရာများကို setup လုပ်ရန်နှင့် configure လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်ကိုပြောပြပါ။
မတ်လ 15, 2013 မှာ 1: 18 AM
ဒါ့အပြင် WP အင်ဂျင် (aff link) တွင်ဆိုဒ်တစ်ခုတည်းအတွက်ဒေါ်လာ ၂၉ / mnth ရွေးစရာရှိသည်။ ဂရိတ်ဝန်ဆောင်မှု, ကြီးသောထောက်ခံမှု။
25:2013 pm မှာဇွန် 9, 59
အချက်အလက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မျှဝေမည် ...